Vaovao - FITORIANA BICYCLE ROAD
Ny hazakazaka matihanina dia niainga tany Eropa Andrefana, afovoany tany Frantsa, Espana, Italia ary ireo firenena ambany. Hatramin'ny tapaky ny taona 1980 dia niovaova ny fanatanjahantena, miaraka amin'ireo hazakazaka matihanina ankehitriny tanterahina manerana ny kaontinanta rehetra manerantany. Ny hazakaza-jaza matihanina sy mpankafy dia atao ihany koa any amin'ny firenena maro. Ny fanatanjahantena dia tantanan'ny Union Cycliste Internationale (UCI). Ary koa ny fiadiana ny tompondakan'i UCI eran-tany ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny hetsika lehibe indrindra dia ny Tour de France, hazakazaka maharitra telo herinandro izay afaka manintona mpanohana amoron-dalana 500000 isan'andro.
Ny halaviran'ny hazakazaka iray andro dia mety haharitra 290 kilaometatra. Ny fandaharam-pianarana dia mety mihazakazaka amin'ny toerana hafa na misy fehezan-dalàna iray na maromaro; ny fampianarana sasany dia manambatra ny roa, izany hoe ny fakana ny mpitaingina avy eo am-piandohana ary avy eo dia vitaina amina fehezan-tany maromaro (mazàna mba hiantohana ny fizahana tsara ho an'ny mpijery amin'ny farany). Ny hazakazaka amin'ny boribory fohy, matetika any amin'ny tanàna na afovoan-tanàna, dia fantatra amin'ny anarana hoe criterium. Ny hazakazaka sasany, fantatra amin'ny anarana hoe sembana, dia natao hifanaraka amin'ireo mpitaingina fahaizana sy / na taona samy hafa; ny vondron'ireo mpitaingina miadana kokoa dia manomboka aloha, miaraka amin'ireo mpitaingina haingana indrindra manomboka farany ary noho izany mila mihazakazaka mafy sy haingana kokoa hisamborana mpifaninana hafa.
Fitsarana amin'ny fotoana
Ny fizahan-toetra isam-potoana (ITT) dia hetsika iray izay fihazakazahan'ireo mpitondra bisikileta irery amin'ny famataran'ora amin'ny tany malalaka na mihodina, na amin'ny lalana eny an-tendrombohitra. Fitsarana ara-potoana ekipa (TTT), ao anatin'izany ny fanandramana ekipa roa-olona, ​​dia hazakazaka bisikileta mifototra amin'ny arabe izay anaovan'ny ekipa mpitaingina bisikileta mifanandrina amin'ny famantaranandro. Amin'ireo andrana andrana ekipa na isam-batan'olona, ​​ny mpitaingina bisikileta dia manomboka ny hazakazaka amin'ny fotoana samy hafa mba ho ara-drariny sy mitovy ny fanombohana tsirairay. Tsy toy ny fizahan-toetra isam-batan'olona izay tsy avela 'manao drafitra' (mitaingina ny fidirana an-tsokosoko) mifanelanelana, amin'ny fitsapana amin'ny fotoana ekipa, ny mpitaingina ny ekipa tsirairay no mampiasa azy io ho toy ny paikadiny lehibe indrindra, ny mpikambana tsirairay kosa dia mihodina eo aloha ary ny mpiara-miasa aminy kosa. mipetraha ao 'aoriana. Ny halaviran'ny hazakazaka dia tsy mitovy amin'ny kilometatra vitsivitsy (matetika ny prologue, fitsapana fotoana iray matetika izay latsaky ny 5 km (8,0 km) alohan'ny hazakazaka an-tsehatra, ampiasaina hamaritana izay mpitaingina mitafy ny akanjon'ny mpitarika amin'ny dingana voalohany) ka eo anelanelan'ny 20 kilaometatra eo ho eo. (32 km) sy 97 kilaometatra.
Randonneuring ary elanelana lavitra
Ny hazakazaka am-bisikileta lavitra indrindra dia hetsika lava be dia be izay mihazakazaka hatrany hatrany ny famantaranandron'ny hazakazaka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Matetika izy ireo dia maharitra andro maromaro ary miala sasatra amin'ny fandaharam-potoanany ireo mpitaingina, ka izay mandresy no voalohany miampita ny tsipika fahatongavana. Anisan'ireo ultramarathons fanta-daza ny Race Across America (RAAM), hazakazaka amoron-dranomasina tsy misy fijanonana ary hazakazaka amina ambaratonga tokana misy mpitaingina 4.800 kilometatra eo ho eo ao anatin'ny herinandro. Ny hazakazaka dia nahazo fankatoavana avy amin'ny UltraMarathon Cycling Association (UMCA). Ny RAAM sy ny hetsika mitovitovy amin'izany dia mamela (ary matetika mitaky) mpifaninana tohanana ekipa iray ekipa; misy ihany koa ny hazakazaka bisikileta lavitra indrindra izay mandrara ny fanampiana ivelany rehetra, toy ny Transcontinental Race sy ny Indian Pacific Wheel Race.
Ny hetsika mifandraika amin'ny randonneuring dia tsy endrika fifaninanana hazakaza-tsoavaly, fa mampiditra bisikileta lalana efa voafaritra mialoha ao anatin'ny fetra voafaritra.